Axmed Maxamed Islaam, ayaa sheegay inay adag tahay sameynta Siyaasada Amniga Qaranka, inta Saraakiisha ciidamada Xooga dalka Somaliya lagu qaybsanaayo hab Qabiil. – STAR FM SOMALIA
Axmed Maxamed Islaam, ayaa sheegay inay adag tahay sameynta Siyaasada Amniga Qaranka, inta Saraakiisha ciidamada Xooga dalka Somaliya lagu qaybsanaayo hab Qabiil.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa sheegay inay adag tahay sameynta Siyaasada Amniga Qaranka, inta Saraakiisha ciidamada Xooga dalka Somaliya lagu qaybsanaayo hab Qabiil.
Axmed Madoobe ayaa wuxuu sheegay inay muhiim tahay markasta ciidamada Xooga dalka Somaliya iyo Saraakiishooda inaan lagu kala qaybin Qabiilka, taasi oo ah caqabada koowaad ee hor istaageysa dhismaha ciidan Qaran.
Wuxuu sheegay iyadoo laga fekeraayo dhismaha ciidanka Qaranka in laga gudbo Qabaa’ilka dadka Somaliyed ay wax ku qaybsadaan, si ciidan Qaran uu u dhismo.
“Inta Saraakiisha ciidamada Xooga dalka lagu soo xulaayo, kani waa reer Hebel iyo reer Hebel, ilama ahan in la dhisi karo Siyaasad ciidan Qaran ah, Taliyaha ciidanka waa reer Hebel inta la leeyahay taasi waa ay adag tahay ciidanka waa inay noqdaan kuwa Qaran oo isku dhafan oo Qabiil aanan laheyn, balse leh Qaran.” Ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay Somaliya hadii ay hesho ciidan Qaran oo isku dhaf ah inay la dagaalami karto cadowgeeda oo ay ka adkaan karto.
Horumar la’aanta haysata ciidamada Xooga dalka Somaliya ayaa ah awoodaha kala duwan ee ciidanka lagu qaybiyo habka Qabiilka, taasi oo keenaysa in Sarkaal kasta uu xooga saaro sidii uu u hubeyn lahaa ciidamada Beeshiisa.
Qodobo laga soo saaray shir Kismaayo uga socday xukuumada Somalia & Jubbaland(Daawo Sawirada)
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray Koofur Africa(Daawo Sawirada)